Mashiinno aan ammaan aheyn - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Mashiinno aan ammaan aheyn
La daabacay torsdag 30 oktober 2014 kl 12.00
Qaar badan oo ka mid ah mashiinnada wax lagu daabaco, sawirrada lagu qaado iyo elektroonikada kale ee guryaha lagu haysto, isla-markaana ku rakiban kombiyuutarrada ayaan laheyn fureyaal lagu xiro waxa loo yaqaanno - Lösenord. Sidaa daraadeed ayey u noqon karaan aalado ey cid walba qayb ka noqon karto, sida uu qoray war-geeyska Dagens Nyheter DN.
Ammaan-darro ballaaran ayaa lagu qabaa mid ka mid ah mashiinnada wax lagu daabaco ee loogu iibsiga badan yahay, kaasina oo ay suurtagal tahay inuu u furan yahay badda internet-ka iyo cid walba loona baahan yahay oo keliya in lagu qoro adreeska internetka ee kombiyuuterka bog caadi ah ee internet-ka.
War-geeyska ayaa soo iibsaday mashiinka wax lagu daabaco oo ku rakibay kombiyuuterka, dabadeed wuxuu saaray mashiinkii sawir si loo daabaco. Goob saddex kiiloomitir u jirta oo uu ku sugnaa weriye war-geeyska ka howl-gala, isagoona kombiyuuter caadi ah oo uu haystay kala socday sawirkii goobta saarnaa.
Kadib war-geeyska oo middaa ku eegay dhammaan cinwaannada IP-ga Iswiidhen ayuu helay 756 oo ah nooca mashiinnada wax lagu daabaco ee uu raadinayay, kaamerooyinka bogagga internet-ka eek u rakibnaa internet-ka.